Fa maninona no tsy mahaliana intsony ny Jailbreak? | Vaovao IPhone
Mbola tadidiko ireo fotoana teo anelanelan'ny iPhone 4 sy ny iPhone 6 izay saika ilaina mafy ny Jailbreak ho antsika rehetra tia iOS. Raha ny marina, ny ampahany lehibe amin'ny lahatsoratray dia natokana ho an'ny atiny rehetra izay hitanay tany amin'ny trano fitehirizana samihafa sy Tweaks vaovao mahatalanjona.
Na izany aza, nilaozan'izany rehetra izany. Ny Jailbreak dia tsy dia misy dikany loatra ary misy aza sahy milaza fa tsy ilaina izany ... Fa maninona no tsy mahaliana intsony ny Jailbreak? Ny zava-drehetra dia manondro fa nahavita nitantana ny iOS sy ny zava-drehetra manodidina azy i Apple ka io safidy io dia tsy dia manintona firy ho an'ny mponina sy ny olon-tsy fantatra.
Ny zava-misy dia i Apple no tompon'andraikitra amin'ny ankamaroany, saingy tsy ny trosa rehetra. Ny zavatra voalohany nataony dia ampio ny doka amin'ny fanaingoana ho an'ny iOS izay nandrakotra filàna maro izay mandrakotra an'i Tweaks toa an'i Activator ihany hatreto ary ny derivatives hafa. Apple dia nahavita namela, na dia nisy fetrany voafaritra ihany aza, topy maso kely amin'ny config à la carte, indrindra fa ny iPhone 6 dia nanintona mpampiasa marobe avy amin'ny Android. Saingy araka ny efa nolazainay teo aloha, tsy izany velively no antony, ary i Apple koa dia niasa mafy nanova ny fomba fiasan'ny iOS, nahatonga azy io ho azo antoka kokoa, rindrina saika tsy vaky, izay lasa iray sokay ary fasika iray hafa.
Na izany aza, ny andraikitry ny mpamorona sy ny mpijirika dia manana ifandraisany betsaka ihany koa. Voalohany indrindra amin'ny fielezan'ny rindranasa "freemium" izay mahatonga ny mpampiasa handinika indray ny filana hack, ary koa ny fandaozana tsy an-kijanona ataon'ireo mpamolavola andrefana ny jailbreak, izay azo oharina amin'ny ekipa mpijirika aziatika fa mihoatra ny indray mandeha izy ireo dia niditra an-tsehatra tamin'ny toerana misy azy ireo amin'ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelo, zavatra azo inoana nefa tsy dia miharihary amin'ny kinova taloha indrindra amin'ny Jailbreak. Miharihary ary tsy azo ihodivirana ny marina, ny "fanapahana" ny iPhone dia mahaliana ny mpampiasa vitsy sy vitsy, ary anton-javatra maro samihafa no tompon'antoka amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Fa maninona no tsy mahaliana intsony ny Jailbreak?
"Satria tsy zava-dehibe intsony ny jailbreak" dia tsy hoe tsy mahaliana azy akory ... fa ny Apple dia manakana ny lavaka rehetra amin'ny betas isan-kerinandro, raha misy jailbreak na inona na inona kinova ... manome toky anao aho fa maro ny olona io, mbola betsaka ny fanaingoana ho an'ny iOS.
Izy ireo koa dia mety hahazo jailbreak izay tsy misy afa-tsy ny fanaingoana sy ny piraty rehetra any ivelany
Manaiky tanteraka, mbola betsaka ny fanaingoana sisa tavela amin'ny iOS.
Ampio ihany koa, amin'ny maha-tompon'ny iPhone X anao dia malahelo azy ianao. Manazava aho. Fitaovana vaovao misy fomba fampiasana hafa, efijery hafa, sns ... Tontolo iray manontolo ahafahana mamorona tweaks ary mahazo bebe kokoa amin'izany na "manamboatra" olana sasany: mifehy, ohatra, nivadika ny radio WIFI sy Bluetooth anao miala tanteraka avy ao amin'ny Center of Control, mihodina ny vatofehin-tsainao, mihidy amin'ny dingana iray ny fampiharana multitasking ... Anisan'ireo ohatra maro hafa, toy ny fanaingoana ny feon'ny WhatsApp (tsy mampino fa mbola tsy misy io safidy io).
Ny zavatra iray hafa dia ny fomba tsy azo itokisana, fa ny faniriana hivezivezy, hanandrana safidy sy hevitra vaovao avy amin'ny mpamorona dia tsy ampy.
Ho ela velona ny Jailbreak.
Io no iPhone (iPhone X) voalohany ananako, nanana Android foana aho. Ary ny tena nahagaga ahy ary gaga ahy tamin'ny ampahany lehibe dia ny tsy ahafahanao manamboatra ny feon'ny WhatsApp ... andao fa tsy Android Froyo v2.2 Android).
Amin'ny ankapobeny, ny zavatra ataoko amin'ny tsy fisian'ny iOS dia fanamboarana bebe kokoa, tsy nangataka ny zavatra rehetra atolotry ny Android aho, ary tsy nampiasa ny antsasaky ny zavatra nananako akory aho, fa misy zavatra izay tena mahagaga amin'ny iOS, indrindra indrindra rehefa tsy hitako loatra ny fetra teknika.
Ny hatsaram-panahy izay toa tsy fetezako amin'ny iOS matetika dia ny hevitra momba ny boaty fasika isaky ny fampiharana, ary ny fifandraisana eo amin'izy ireo dia tsy azo atao amin'ny fomba voajanahary.
Ohatra, raha manandrana mampiditra rakitra ao amin'ny Gmail na Linkedin ianao (hanome ohatra roa), amin'ny voalohany dia tsy dia misy ny safidy, mifototra amin'ny izay anananao ao amin'ny Google Drive ary amin'ny faharoa dia tsy misy safidy mivantana. Tokony hanavao ny kernel ny iOS mba hamelana toerana fitadidiana hizara eo amin'ireo fampiharana, indrindra rehefa te handefa antontan-taratasy ianao ...
Raha fintinina, ny iOS dia tsy maintsy mbola (raha misy izany) manatsara bebe kokoa amin'ny fomba maro na dia mihoatra ny safidy namboarina aza. Tsy fantatro izany voalohany, fa ny Jailbreak dia heveriko fa raha nahavita nanakaiky ireo karazan-tsafidy izay tao amin'ny OS maniry hametraka OS birao tokony hisy.
Azo atao ny manova ny feon'ny WhatsApp, ataoko foana.
Toy ny mahazatra, tsy misy feo avy any ivelan'ny fampiharana azo ampiasaina. Raha mba azo ampifandraisina amin'ny fampifandraisana ny iPhone amin'ny iTunes ...
Nosoloiko ny fanao am-peo ny rakitra zana-kazo tamin'ny fomban-drazana, saingy tsy haiko raha mbola azo atao izany. Toy izany koa, tsy tokony ho sarotra izany fikirakirana izany.
CesarGT dia hoy izy:
Azoko manokana fa ny JAILBREAK dia mahatonga ny iOS ho mora milamina.
iOS na aiza na aiza akaikin'ny fanaingoana natolotr'i Jailbreak, nanaiky fa nampiditra asa be dia be izy ireo, saingy be loatra ny tsy hita! maro !.
Ary araka ny nolazain'ilay mpampiasa etsy ambony, nanjary sarotra kokoa ny jailbreak, satria talohan'i Apple nanangana fanavaozana, dia ny helo, tsy izao, mandefa betas sy fanavaozana izy ireo na dia manamboatra faritra iray amin'ny timbuctu aza.
Valiny amin'i CesarGT
Toy ny fenitra dia tsy misy feo azo ampiasaina ivelan'ny fampiharana. Raha mba azo ampifandraisina amin'ny fampifandraisana ny iPhone amin'ny iTunes ...
Ny nanintona ahy hanao jailbreak ireo iPhones rehetra nataoko dia ny fahafaha-manaingo azy. Ny sary masina eo amin'ny efijery, ny fiovan'ny lokon'ny interface amin'ny eklipse, ny efijery hidin-trano miaraka amin'ny sarimiaina mivantana amin'ny toetr'andro. Ny marina dia mbola mampiasa iOS aho fa lasa somary monotonous tsy misy jailbreak. Manantena aho fa hiverina ianao !!
Mandra-pahoviana io mania hiteny amin'ny ambiny io ??? mitsangatsangana amin'ny Twitter ary zahao hoe firy ny jailbreaks misy ao amin'ny beta amin'ny iOS 11 miandry ny fanavaozana an'i Cydia, tsy manisa safidy 2 na 3 noforonina ho an'i Cydia, be dia be ny isan'ny olona miandry ary milaza ianao fa misy ny olona tsy liana intsony? ny zavatra vakiana ho an'ny andriamanitra.
Hahahahaha, fa miandry azy toy ny rano Mey aho miaraka amin'ny iphone 8 plus 256gb sy ios 11.1.2.
Miguel Vasquez dia hoy izy:
Mbola manova ny iPhone 6S Plus amin'ny Jailbreak aho, satria nanana ny iPhone 3G voalohany nataoko tamin'ny Jailbreak, mahafinaritra ary antenaiko fa tsy avelan'izy ireo nilaozana.
Valiny tamin'i Miguel Vasquez
bruxite dia hoy izy:
Raha mila toerana aho, maninona no mividy audi ????
Mamaly an'i bruxita
Carmen wong dia hoy izy:
Valiny tamin'i Carmen Wong
Google Wallet sy Android Pay dia lasa Google Pay